Pear garden | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Pear garden
Fantatra fa ny sakafo ara-dalàna dia anisan'ny "fototry" ny fahasalaman'ny olombelona. Ampahany manan-danja amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana ny fihinanana voankazo sy legioma. Avy amin'ireny sakafo ireny ny olona iray mahazo vay fantatra amin'ny hoe vitamina. Ny vanim-potoana no fotoana tsara indrindra ho an'ny fambolena sy fanandramana ny voankazo samihafa sy ny kirihitra.
Efa nandre ny paozin'i Chizhov ve ianao? Ary angamba efa nankafizinao ny tsirony matsiro ary maniry ny hamboly hazo tahaka izany ao an-tranonao? Hodinihintsika ao amin'ny lahatsorantsika izay rehetra ilaina amin'izany. Famaritana ny voankazo (tombontsoa, ​​ny tsy fahampiana) Chizhovskaya pear-hybrid, nentin'ireo mpihaza Rosiana, izay nahazoany tamin'ny famindrana karazana tsara roa.
Pear Lada Ny tsirairay dia miandrandra ny lohataona, ny fahavaratra, mba tsy hankafy ny hafanana sy ny andro tsara, fa koa ny mamy amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny natiora. Mazava ho azy, te hanandrana haingana ny karazana voankazo sy mpamboly matihanina ny tsirairay, ary ny mpamboly mpamboly dia mihamahazo vinaingitra. Tamin'io fikasana io no niseho ny karazana lamaody navelan'i Lada tsy ela.
Ankehitriny, noho ny fandrosoan'ny fiompiana mavitrika, maro amin'ireo solontenan'ny fambolena fambolena no miseho. Ho an'ny famoronana dia ampiasaina ireo karazana voavonjy teo aloha. Ny karazany vaovao dia manatsara ny tsirony, manatsara ny fahasamihafana amin'ny aretina isan-karazany. Ny iray amin'ireo karazana fototra ireo dia ny "Bergamot".
Pear Talgar hatsaran-tarehy
Ny lehilahy ankehitriny, izay miahy ny fahasalamany, dia tokony hifantina amin'ny sakafo. Mila ampidirina ao amin'ny sakafo ny menaka satria misy ny tsiranoka marobe ampiasain'ny sela sy hoditra. Misy karazany maro an'io zavamaniry io, fa ny iray amin'ireo solontenam-panjakana malaza indrindra dia ny vary varimbazaha Talgar.
Pear Forest Forest Beauty
Amin'ny fanombohan'ny fahavaratra, ny olona dia tsy manana fihetseham-po tsara, fa koa ny fahafahana mihinana voankazo sy legioma vaovao. Raha manana ny zarinao na dacha ianao, dia misy fotoana iray ahafahana maniry ireo voankazo sy legioma ireo ihany koa. Androany, azonao atao ny maniry zavatra: avy amin'ny paoma sy volombava ho an'ny oranges.
Pard Memory Yakovlev
Ny olona rehetra izay tia ny zaridaina dia manandrana mampitombo ny isan'ny vokatra "miaina" ao amin'ny taniny. Noho izany dia mihamitombo hatrany ny fahalianana amin'ny hazo fihinam-boa. Ankehitriny, saika amin'ny tranokala tsirairay dia mitombo isan-karazany ny paoma sy ny paozy, ny boka, ny serizy ary ny voankazo sy ny voankazo hafa.
Vitsy ny olona tsy faly amin'ny fahavaratra, ny masoandro, ny voankazo ary ny legioma. Na izany na tsy izany, hatramin'ny fahazazana dia samy nilazana izahay fa ny vokatra azo avy amin'ny fambolena dia tena ilaina tokoa amin'ny vatantsika. Ny voankazo na ny legioma tsirairay dia manana vitamina sy mineraly manokana. Noho izany, ho an'ny fanarenana tanteraka ny vatana aorian'ny ririnina sy ny avitaminosis, dia mila mampiditra ireo vokatra ho an'ny sakafo ianao.
Ankehitriny, izay olona te-hamorona ny tanimboliny manokana dia tsy mitaky fahalalana sy fahaiza-manao manokana. Raha ny tena izy, amin'ny ankamaroan'ny fitsaboana, ny solontenan'ny zaridaina rehetra dia manome vokatra tsara sy maharitra. Ny karazana voankazo maro samihafa dia mety hitombo ao anatin'ny toetrantsika. Na dia ny solontenan'ny "avaratra" tahaka ny paka Ussuri aza afaka mamaka ao amin'ny tanimbolintsika.
Ahoana ny fomba entina miteraka kakazo ao amin'ny trano
Teny sy fomba fiadiana amin'ny bibikely malama
Ny ankamaroan'ny olona dia ny tomates "Summer Resident": toetra sy famaritana ny karazany, sary
Mampifanaraka tsara ny fandriany ao amin'ny trano fonenana: toerana, habaka, haavo, sary
Ny fomba famolavolana sy mampitombo ny tongolo "Setton"
Silver Dichondra: Tsiambaratelo ho an'ny Fitomboana Mahomby
Alan spathiphyllum malemy sy tsy mendri-piderana: famaritana, fambolena sy fiahiana, sary volomparasy
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Pear garden